Duinbergen, Knokke-Heist, amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2
! Iindwendwe kufuneka zize namaphepha azo ebhedi kunye nebhafu/iitawuli zasekhitshini!
Indlu ibanzi (115m²) kwaye ifakwe yahonjiswa kumgangatho ophezulu. Igqitywe ngo-2005, indawo yokuhlala yaseBrunch Garden ikumgama oziimitha ezingama-20 ukusuka elunxwemeni kunye nezinyuko ezimbini ukusuka kwiivenkile zegrosari. Iwasha, isomisi, intsimbi kunye nebhodi nazo ziyafumaneka ukuze uhlale ukhululekile. Iimbono zeBalcony eStübbenpark.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu ephindwe kabini enomandlalo owongezelelekileyo kunye negumbi lokuhlambela leen-suite elineshawa kunye nebassin yokuhlamba. Amanye amagumbi amabini okulala, elinye linebhedi ezi-2 kunye nelinye elinebhedi enye. Le ndlu ilala abantu aba-6. Igumbi lokuhlambela elinye elikhulu elineshawa, i-wc kunye neebhasini ezimbini zokuhlambela. Yahlula indlu yangasese yeendwendwe epasejini. Indawo yokulala inokuvalwa ukusuka kwindawo yemini ngokusebenzisa ucango lwesilayidi olukrelekrele. Abantwana banokulala kamnandi ngoxa abazali benandipha ukuhlwa ebusuku kunye nabahlobo.
I-cable tv kwindawo yokuhlala. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ukonwabela iingokuhlwa zokupheka.
Igumbi lokuhlala livula iifestile ezinkulu ezityibilikayo ezifikelela kwibalcony enelanga apho izitulo zinokubeka ukonwabela i-apero enemibono kwi-Stübbenpark kunye nezindlu ezintle.
Kukho umenzi wekofu wekofu ephantsi enezihluzi. Ekhitshini iziqholo eziqhelekileyo, ioyile yomnquma, iswekile njl.njl ziyafumaneka ukuba uzisebenzise.
4.85 · Izimvo eziyi-29
Nceda uqaphele ukuba iindwendwe kufuneka zize namashiti azo ebhedi kunye neBhafu/iitawuli zaseKitchen kwigumbi lokuhlala. IDuinbergen yilali encinci yolwandle epholileyo enenduli zesanti kunye nezindlu ezimhlophe. Iilwandle ezinkulu zesanti, iindawo zokutyela, iivenkile ezincinci zokuthenga igrosari kunye neebhari zaselwandle ezintle. Kukho iindawo ezininzi zokurenta iibhayisekile ezikhoyo ukuze uchithe emva kwemini kwiindlela ezininzi zebhayisekile ezifumaneka ebumelwaneni. Imizuzu elishumi uhamba ngebhayisekile ukuya eKnokke-Zoute yodumo lwehlabathi kunye neevenkile zayo zodidi oluphezulu ezikhoyo okanye ufumane ikofu kwaye ujonge iimoto ezintle kwi-'Place-m'as-tu vu'. Ipaki yendalo 'iZwin' ibekwe eKnokke-Zoute kwaye ikufanele ukutyelelwa. Ukuba uziva unethamsanqa kwicala lakho, Casino Knokke ibekwe kwi Corniche, imizuzu elishumi kuphela uhamba ukusuka eflethini.
Kukho amathuba amaninzi oKutya eKnokke.
Ngemoto okanye ngololiwe, isixeko esinepittoresque saseBruges aka 'iVenice encinci' ikumgama oziikhilomitha ezingama-20 kuphela ukusuka eDuinbergen kwaye ayinakushiywa ngaphandle 'kuluhlu lwezinto oza kuzenza'.
Kukho ibala legalufa elimangalisayo elikwi-100 leemitha ukusuka e-Stübbenpark kunye nemingxuma eli-18 ibala legalufa e-Knokke-Zoute.
Ithenisi inokudlalwa eChalet-Suisse, Elizabetlaan 321.
Kukho iiklabhu zokuhamba ngeenqanawa kunye ne-surf elunxwemeni olukufutshane.
NgoJulayi nango-Agasti icorniche yeyabahambi ngeenyawo kuphela.
Belgian family living in Bonheiden
Ihlala ifumaneka kwiindwendwe zethu ngemibuzo yesiDatshi, isiNgesi nesiFrentshi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Knokke-Heist